Nickel Waya ntupu
Gbasaa Metal waya ntupu
Epoxy ntekwasa waya ntupu
Nwayọọ Steel Waya ntupu
MS Plain ikpa Waya ntupu
Kpaliri kpara waya ntupu
Extruder Myọcha Series
site ha na 20-08-16
site ha na 20-05-08
gbasawanyere ígwè bụ ígwè mpempe akwụkwọ a gbawara n’agbati wee kee a diamond ma ọ bụ hexagonal ịke. Ndị mmadụ nwere ike iji ya n'ọtụtụ ụzọ Nkọwapụta dị ka n'okpuru: Strands bụ eriri ígwè gbawara n'otu n'otu, ma ọ bụ akụkụ nke oghere diamond. SWD, ma ọ bụ Short Way of Design, bụ ebe dị anya n'etiti p ...
Extruder ihuenyo bụ dị iche iche nke waya ntupu bee n'ime iberibe
Akụrụngwa ndị ahụ bụ nchara nchara, nchara nchara na ihe ndị ọzọ. Ngwunye igwe anaghị agba nchara na-eguzogide nchara karịa ndị ọzọ. Igwe anaghị agba nchara Extruder reenskwà na n'ọtụtụ ebe etinyere na plastic mpempe akwụkwọ extruder,, granulator, na nonwoven akwa, agba masterbatch, wdg ntupu: ...
nkọwapụta ngwaahịa Nickel waya ntupu na-ezo aka na ngwaahịa ntaneti ígwè nke ejiri ihe nickel dị ọcha (waya nickel, plate nickel, nickel foil, wdg) na ọdịnaya nickel nke 99.5% ma ọ bụ karịa. Dịka usoro mmepụta, ngwaahịa ndị a kewara n'ime ụdị ndị a: A. Nickel w ...
Epoxy gbanyere ntupu waya
1. Product aha / aha otutu: Epoxy ntekwasa waya ntupu, epoxy mkpuchi ntupu, electrostatic mkpuchi ntupu, haịdrọlik nyo nchedo ntupu, haịdrọlik nyo ntupu, haịdrọlik nyo metal ntupu, iyo support ntupu, epoxy window ihuenyo ntupu. 2. Zuru ezu iwebata ngwaahịa: Industrial epoxy ntekwasa ...